Tetikasa Blockchain DFINITY Stiftung manangana $ 61M - Blockchain News
Tetikasa Blockchain DFINITY Stiftung manangana $ 61M
Ny fikambanana tsy mitady tombontsoa izay te-hampivelatra ny aterineto fitongilànana kokoa mampiasa blockchain efa natsangana $61 tapitrisa in famatsiam-bola avy any U.S. capital barotra mafy Horowitz Andreessen sy ny tahirim-bola fefy Polychain Renivohitra, dia hoy ny Alarobia.
DFINITY Stiftung te hamorona zavatra izany dia miantso ny "computer aterineto,"Misokatra tambajotra izay manompo ho toy ny lehibe virtoaly mainframe solosaina ao amin'ny Internet. Izany no mamela fitongilànana dika maro teknolojia tolotra aterineto toy ny Uber, Dropbox, ary eBay, araka ny fanambarana orinasa.
Ryan Zurrer, barotra mpiara-miombon'antoka ny Polychain Renivohitra, niantso ny teknolojia ny "zava-baovao tena maharesy lahatra" ny namany ka nanao hoe: dia "manao ny lehibe indrindra-Renivohitra fanapariahana mandrakizay."
"Amin'izao fotoana izao, isika mitady mafy ny fomba mba hanitatra fizarana,"Hoy ny filoha DFINITY sy ny lehiben'ny mpahay siansa Dominic Williams. "Tsy nahazo tinady eo amin'ny an-jatony tapitrisa te handray anjara amin'ny tetikasa."
Fitsarana ankasitrahany Mt. Gox repayme...
Mafana: Zcash (Zak) Added to...
Zcash (Zak) listed on Coinbase...
Previous Post:Ahoana ny fandraràna ny dokam-barotra ao amin'ny Facebook crypto dia hanampy ny orinasa
Pliadisfoto hoy i:
Mey 11, 2018 amin'ny 6:28 AM